Mootummaan akeeka nama nyaattummaa hordofu Wayyaaneen ummata Oromoo Harargee dhihaa dararuu imaammata dhaabbataa godhatee itti fufeaa jira.
(Madda Oduu ABO/MOA/Amajjii 27, 2009) Barattootii fi ummati Oromoo hireen isaanii Wayyaaneen dararamuu tahe erga Oromiyaan werartuu TPLFn weeraramtee as halkan tokkoof birruu fi sodaa malee bulanii hin beekan,haala kanaan ammas irra deddebitee Oromoota Hararge dhihaa keessa jiraatan maqaa WBO gargaartu jedhuun baatii Amajjii 2009 kana keessaa loltooti Wayyaanee uffata ummataa uffachuun baadiyyaa fi magaalaa keessaa deemanii ummata badii tokkoon malee Oromoota ukkamsanii bakka buutee dhabsiisaa jiru.
Naannoolee Baddeessaa, Galamsoo fi Bookee fi lafa naannoo gammoojjii tahan keessa osoo hin hafiin keessa bobba’anii Oromoota qotataa fi barataa akkasumas nagaadota hidhaatti guuraa jiraachuu MOA gabaasa.
Namoota hanga ammaatti hidhaman keessaa hangi tokko magaalaa Baddeessaa keessa gaafa Amajjii 24,2009 qabanii hidhaatti darban
Barataa Bayisaa Huseeen
Kazaal A daldalaa jimaa nama tahe
Ahiman Sheekaa magaalaa Ciroo 02 kan jiraatu.
Hidhaa bakka hin beekamnetti geessuun isaanii beekamee jira. MOA hanga gabaasa kana qindeessetti naannoo fi magaalotiin dhiha Harargee olitti tuqaman human tikaa fi waraana Wayyaaneen cinqamaa jiraachuu gabaasa.